“နျောစေးစေးထူးကို ကွညျ့ပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပွနျမွငျယောငျလာမိတဲ့အတှကျ မကျြရညျကမြိတဲ့ ပိုးမီ” – Daung
ပရိသတျစိတျဝငျစားမှုမွငျ့တကျနတေဲ့ အစီအစဉျတဈခုဖွဈတဲ့ မွနျမာအိုငျဒေါကတော့ ပွိုငျပှဲအပတျစဉျနှဈခုပွီးမွောကျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ တဈပတျကိုတဈယောကျနှုနျးနဲ့ ပွိုငျပှဲကို နူတျဆကျထှကျခှာမှာဖွဈပွီး ပထမအပတျမှာတော့ ပွိုငျပှဲဝငျခွူးစဈဟနျက နူတျဆကျထှကျခှာခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ ဒုတိယမွောကျအပတျဖွဈတဲ့ ရော့ချဂီတပွိုငျပှဲမှာတော့ ပွိုငျပှဲဝငျနျောစေးစေးထူးက မဲအရအေတှကျအနညျးဆုံးရရှိခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ ဒိုငျတှရေဲ့(save) လုပျခွငျးကိုရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
နျောစေးစေးထူးဟာ အရညျအခငျြးရှိတဲ့ပွိုငျပှဲဝငျတဈယောကျဖွဈပွီး ဒိုငျဖွဈသူမတငျဇာမျောကတော့ ထှကျခှာဖို့စောသေးတယျလို့ မှတျခကျြပေးခံခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ နျောစေးစေးထူးကတော့ ဒိုငျဖွဈသူတှအေတှကျ ဆုံးဖွတျရခကျစလေောကျခဲ့ပွီး သီခငျြးပျေါသကျဝငျခံစားမှု အားကောငျးလှနျးတာကွောငျ့ (save)လုပျခံခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မွနျမာအိုငျဒေါ Season-2 ရဲ့တတိယဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ ပိုးမီကိုယျတိုငျလညျး ပွိုငျပှဲအပတျစဉျတဈခုမှာ ဒိုငျတှရေဲ့(save)လုပျခွငျးကို ခံခဲ့ရဖူးပါတယျ။
နျောစေးစေးထူးဟာ စိတျဓာတျမာတဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျဖွဈပွီး ပိုးမီကိုယျတိုငျလညျး သူ့ကိုကွညျ့နရေငျး ကိုယျ့ကိုကိုယျပွနျမွငျယောငျလာမိတဲ့အကွောငျးကို “အရှုံးကိုလကျခံဖို့ပွငျဆငျထားတဲ့ ကောငျမလေး..လုံးဝမကျြရညျမကတြဲ့ကောငျမလေး…နောကျဆုံး save song ဆိုသှားတဲ့အခြိနျထိ တညျငွိမျနတေဲ့ ကောငျမလေး…Save လုပျတယျ ဆိုမှ တငျးထားတဲ့စိတျကို လှတျခပြွီး မကျြရညျတှေ ကလြာတဲ့ကောငျမလေး…
ကိုယျ့တုနျးက save လုပျခံရတဲ့အခြိနျက ကိုယျ့ပုံကို ကိုယျပွနျမွငျနရေသလိုပဲ…ကိုယျ ခံစားခဲ့ရတဲ့အတိုငျး သူလညျး ဝမျးနညျးဝမျးသာ ခံစားနရေမှာဆိုပီး …ကိုယျပါ ရောပွီးမကျြရညျ ကမြိပွနျပွီ…စပွိုငျကတညျးက သတိထားမိတဲ့သူထဲမှာ ပါတဲ့သူပါ ..သီခငျြးတှကေို အရိုးသားဆုံး မာယာမပါပဲ ဆိုတတျတဲ့သူခံစားသကျဝငျမှု အားကောငျးတဲ့သူ …သီခငျြးဆိုကောငျးတဲ့သူဆို ကိုယျက ခဈြပွီးသားမို့ ဒီကောငျမလေးကိုလဲ ခဈြတယျ…ရှဆေ့ကျပွီး အရညျအခငျြးစဈစဈကို ဒိထကျပိုပွနိုငျပွီးတော့ save လုပျရကြိုးနပျအောငျ ကွိုးစားနိုငျမယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ…ဖိုကျတငျး ! စေးရေ Naw Say Say Htoo”သူ့ရဲ့ဖဘှေ့တျချစာမကျြနှာမှာ ရေးသားဖျောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Source – Poe Mi
“နော်စေးစေးထူးကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မြင်ယောင်လာမိတဲ့အတွက် မျက်ရည်ကျမိတဲ့ ပိုးမီ”
ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါကတော့ ပြိုင်ပွဲအပတ်စဉ်နှစ်ခုပြီးမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ပတ်ကိုတစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ ပြိုင်ပွဲကို နူတ်ဆက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီး ပထမအပတ်မှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်ခြူးစစ်ဟန်က နူတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယမြောက်အပတ်ဖြစ်တဲ့ ရော့ခ်ဂီတပြိုင်ပွဲမှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်နော်စေးစေးထူးက မဲအရေအတွက်အနည်းဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ဒိုင်တွေရဲ့(save) လုပ်ခြင်းကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နော်စေးစေးထူးဟာ အရည်အချင်းရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒိုင်ဖြစ်သူမတင်ဇာမော်ကတော့ ထွက်ခွာဖို့စောသေးတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ နော်စေးစေးထူးကတော့ ဒိုင်ဖြစ်သူတွေအတွက် ဆုံးဖြတ်ရခက်စေလောက်ခဲ့ပြီး သီချင်းပေါ်သက်ဝင်ခံစားမှု အားကောင်းလွန်းတာကြောင့် (save)လုပ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာအိုင်ဒေါ Season-2 ရဲ့တတိယဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ ပိုးမီကိုယ်တိုင်လည်း ပြိုင်ပွဲအပတ်စဉ်တစ်ခုမှာ ဒိုင်တွေရဲ့(save)လုပ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။
နော်စေးစေးထူးဟာ စိတ်ဓာတ်မာတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပိုးမီကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ကိုကြည့်နေရင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မြင်ယောင်လာမိတဲ့အကြောင်းကို “အရှုံးကိုလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ကောင်မလေး..လုံးဝမျက်ရည်မကျတဲ့ကောင်မလေး…နောက်ဆုံး save song ဆိုသွားတဲ့အချိန်ထိ တည်ငြိမ်နေတဲ့ ကောင်မလေး…Save လုပ်တယ် ဆိုမှ တင်းထားတဲ့စိတ်ကို လွတ်ချပြီး မျက်ရည်တွေ ကျလာတဲ့ကောင်မလေး…
ကိုယ့်တုန်းက save လုပ်ခံရတဲ့အချိန်က ကိုယ့်ပုံကို ကိုယ်ပြန်မြင်နေရသလိုပဲ…ကိုယ် ခံစားခဲ့ရတဲ့အတိုင်း သူလည်း ဝမ်းနည်းဝမ်းသာ ခံစားနေရမှာဆိုပီး …ကိုယ်ပါ ရောပြီးမျက်ရည် ကျမိပြန်ပြီ…စပြိုင်ကတည်းက သတိထားမိတဲ့သူထဲမှာ ပါတဲ့သူပါ ..သီချင်းတွေကို အရိုးသားဆုံး မာယာမပါပဲ ဆိုတတ်တဲ့သူခံစားသက်ဝင်မှု အားကောင်းတဲ့သူ …သီချင်းဆိုကောင်းတဲ့သူဆို ကိုယ်က ချစ်ပြီးသားမို့ ဒီကောင်မလေးကိုလဲ ချစ်တယ်…ရှေ့ဆက်ပြီး အရည်အချင်းစစ်စစ်ကို ဒိထက်ပိုပြနိုင်ပြီးတော့ save လုပ်ရကျိုးနပ်အောင် ကြိုးစားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်…ဖိုက်တင်း ! စေးရေ Naw Say Say Htoo”သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။